၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြန်လည်အသုံးချစွမ်းအင်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မ?? - Yangon Media Group
လေနှင့်နေကဲ့သို့သော ပြန်လည်အသုံးချ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည့် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က ဆက်လက် တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ပြည် ထောင်စု စွမ်းအင်သတင်းအချက်အလက် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ (EIA) က ပြောကြား ခဲ့သည်။ EIA ၏ အဆိုအရ လစဉ် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် လေစွမ်းအင်မှ ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း၊ နေစွမ်းအင်မှ ၁ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်း ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထိုအတောအတွင်း ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း လေစွမ်းအင်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု ဆက်လက်တိုးပွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် လေစွမ်းအင်သည် ပြန်လည်အသုံးချလျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုက ကြီးစိုးလာမည်ဖြစ် သည်ဟု သိရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အသားတင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်း ခဲ့ကြောင်း၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် ကျောက်မီး သွေးမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ ၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးကျဆင်းခဲ့ ကြောင်း၊ လေ၊ နေနှင့် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ် အားထုတ်လုပ်မှုကမူ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ တိုး ပွားလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
New Look ကုမ္ပဏီက အလုပ်အကိုင်နေရာ ၁ဝဝဝ နှင့် စတိုးဆိုင် ၆ဝ လျှော့ချမည်
လူအများကြီးက ကိုယ့်ကို မချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အနီးအနားကလူတွေ ကိုယ့်ကိုချစ်ဖို့ပဲ
(၂၂) ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၅ဝဝ တန် အောင်ဘာလေ သိန်းဆုဖွင့်ပွဲ၌ ဆုမဲပေါင်း ၁၃၅ဝဝဝ ကျော်၊ ဆုငွေ ကျပ်သ??